Akụkọ - Ihe mkpuchi PVC nwere ike ịdị mma nke ukwuu!
Oghere Mgbidi PVC
Cekwanyere N'uko Panel
Tkpụzi ịkpụzi PVC
Skkwanyere Skirting Board
WPC Ogwe Mgbidi
WPC N'uko Panel
Ihe mkpuchi PVC nwere ike maa mma!
Kemgbe ụwa, ịchụso “ịma mma” nke ihe a kpọrọ mmadụ akwụsịbeghị. Laa azụ na ngwụcha oge a rue na mmalite nke narị afọ nke iri na asatọ, ndị Sweden a ma ama na ndị ọchụnta ego bara ọgaranya bidoro iji mkpuchi mgbidi dịka ihe ịchọ mma ime. Stylesdị ndị ahụ bụ mkpuchi mgbidi cashmere, mkpuchi Gobelin, na ịcha mma. Ihe mkpuchi mgbidi akpụkpọ anụ, velvet satin mgbidi na-ekpuchi, wdg, iji gosipụta njirimara ha. Mgbe e mesịrị, ihe mkpuchi mgbidi (owu textiles) ghọrọ ihe a ma ama n'etiti ndị nkịtị ma bụrụ ọnụma niile.
N'oge a, na ọganihu na-aga n'ihu nke teknụzụ mmepụta, ụdị akwụkwọ mkpuchi akwụkwọ ahụaja na-aga n'ihu na-abawanye. Site na ya ire ọkụ, antibacterial, mildew, waterproof na antifouling ọrụ, PVC mgbidi na-ekpuchi ka a na-emegharị maka mkpa nke gburugburu ebe dị iche iche ma gboo mkpa nke ndị mmadụ nke oge a Mkpa ndị bara uru nke ụlọ ahụ mepụtara ebe dị ọkụ, dị mma ma dị mma maka ndị mmadụ , nke na-enweghị atụ site na ihe ịchọ mma mgbidi ndị ọzọ.
Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-achị ọchị na-ekwu na mkpuchi mgbidi PVC enweghị ike ịbụ "ejiji ejiji" maka mgbidi, n'ihi na echiche mbụ nke ọha na eze banyere mkpuchi mgbidi PVC bụ ihe bara uru.
1. "Ihe pụrụ iche" nke mkpuchi mgbidi PVC
Emdị akụkụ atọ na agba agba dị elu nke mepụtara PVC mgbidi na-enweghị atụ site na mkpuchi mkpuchi akwa na ọdịnala. Enwere ike ijikọta mkpuchi mgbidi PVC yana usoro akụkụ atọ mara mma na usoro dị iche iche iji mepụta elu ala. Mmetụta ọhụụ nke mkpuchi mgbidi enweghị ike iru
A na-agbagharị ihe mkpuchi mgbidi PVC site na rollers, nke nwere ike ịgwakọta usoro dị iche iche, ihe dị iche iche, na agba dị iche iche. E jiri ya tụnyere ihe mkpuchi mgbidi nke otu ihe na-eme naanị mgbanwe na usoro, ihe mkpuchi mgbidi PVC nwere ike ịmepụta ọgaranya na atụmatụ, yabụ ọtụtụ nnukwu ụlọ oriri na ọ hotelsụ willụ ga-ahọrọ PVC mgbidi dị ka ihe eji achọ mgbidi.
2. Ihe mkpuchi PVC nwere ike "dobe ntorobịa ruo mgbe ebighi ebi"
Mmetụta mbụ dị mkpa, mana nke ka mkpa bụ otu esi echekwa "ịma mma" a. Na oge mgbe arụchara ụlọ ahụ, ọtụtụ mkpuchi mgbidi ga-enwe nsogbu dịka ịka nká na ihe na-adịghị mma. E jiri ya tụnyere ụdị mkpuchi ndị ọzọ, mkpuchi mgbidi PVC, ihe nkiri ịkwanyere ihe jikọrọ PVC nwere ike ịchekwa "ntorobịa" nke ọma, ọbụlagodi mgbe ogologo oge ojiji, ha ka nwere agba agba mbụ na ihe na-enwu gbaa. Ọ nwekwara uru nke ịbụ ihe na-enweghị mmiri, mgbochi mmiri, na ihicha mmiri
3. Ihe mkpuchi mgbidi PVC kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ndị ọzọ
Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ebe ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ officeụ ,ụ na ụlọ ọrụ ọfịs na-ahọrọ iji mkpuchi mgbidi PVC maka mgbidi mgbidi ha. Developersfọdụ ndị mmepe na-ere ọbụna ụlọ obibi dị elu, ụlọ obibi, na ụlọ ọrụ ọfịs mgbe ejiri mkpuchi mgbidi PVC chọọ ha mma.
Rịọ a Quote
-Adịbeghị anya, POS
Hot-ere ellerkwanyere ịkwanyere Wall Boards Na N'uko ịkwanyere ogwe N'ihi Interior TV
Mgbochi maka iji mgbidi dị na mpụga
Etu esi etinye pvc mgbidi eji achọ ogwe